Ingase ihlehliswe futhi ingqungquthela ye-ANCYL | News24
Ingase ihlehliswe futhi ingqungquthela ye-ANCYL
Johannesburg - Ingase imiswe futhi ingqungquthela kazwelonke ye-ANC Youth League ebhekwe ngabomvu ngenxa yezinkinga ezisakhungethe ezinye izifundazwe.
Kunamahlebezi athi iNational Task Team izomemezela ukuhlehliswa kwale ngqungquthela ngesonto elizayo.
Le nkomfa bekumele ibanjwe ngomhlaka-25 kuya ku-28 Juni.
Amalungu e-ANCYL KwaZulu-Natal, angathandanga ukudalulwa amagama, akhulume neNews24 athi le nkomfa ihlehliselwe usuku olungaziwa ngenxa yokungavumelani ngokuthi ngubani okumele ahole le nhlangano.
OLUNYE UDABA: Kulindeleke ingabi nazihibe eye-ANCYL eKZN
Omunye umthomno uthe: "Sizama ukuphusha ukuthi le nkomfa ihlehliswe. Ngeke kube kuhle ukuthi iqhubeke singakazixazululi izinkinga esibhekene nazo.
"Sifuna kuqalwe phansi izinto eziningi e-KZN, naseNorth West kanti eLimpopo imiphumela yathathwa njengengekho emthethweni yinkantolo."
I-ANCYL KwaZulu-Natal ibambe ingqungquthela ngasekuqaleni kwale nyanga kuqokwa ubuhloli, kanti ibe nokuphazamiseka.